I-Yellow House - amamitha angu-300 ukusuka ePraia do Campeche
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Nelson
Siyakwamukela ku-Yellow House. Indlu yethu ingahlala abantu abangafika kwabayi-5, inemibhede emi-3 yabantu abangabodwa kanye nombhede ophindwe kabili. Ihlukaniswe ngamakamelo ama-3: Igumbi lokulala elizimele elinesimo sezulu esibandayo, igumbi lokugezela nekhishi (elinemibhede emi-3 eyodwa). Indawo yangaphandle enezoso, ishawa, ithangi nocingo lwezingubo. Ukubona izithombe namavidiyo engeziwe, yiya ku-: @byhouse17.
Indlu itholakala ngamamitha angu-300 ukusuka ebhishi laseCampeche futhi iqukethe: i-microwave, i-air conditioning ekamelweni langasese, i-TV, ifeni, ilineni lombhede, amathawula, umcamelo, isiqandisi, umugqa wezingubo, ithangi lokuwasha, izoso, ishawa yasendlini nangaphandle.
5.0 ·55 okushiwo abanye
5.0 · 55 okushiwo abanye
Inendawo enhle, i-Yellow House iyiminithi elingu-1 (ukuhamba) kusuka ezindaweni zokudlela ezimbili ekhoneni le-Avenida Pequeno Príncipe ne-Rua das Corticeiras. Amamitha angu-300 ukusuka ogwini (lapho ungathola khona izindawo zokudlela kanye nezindawo zokudla okulula), imizuzu emi-4 (uhamba ngezinyawo) ukusuka eFarmácia do Riozinho kanye nemizuzu engu-16 (uhamba ngezinyawo) ukusuka enkabeni yeCampeche. Lapho, ungathola i-super market, izitolo nama-snack bars.
IYellow House ingamakhilomitha ayi-9 ukusuka eFlorianópolis International Airport(imizuzu eyi-15).
Noma nini lapho udinga, ungathintana ngocingo.
UNelson Ungumbungazi ovelele